Iisonethi ezi-5 zikaFederico García Lorca ukubhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe. | Uncwadi lwangoku
5 ngoJuni ye-1898 uninzi lufunda imbongi yaseSpain ngawo onke amaxesha, UFederico Garcia Lorca. Kumntu oshushu ngakumbi kunendinyana, iinoveli ezininzi kunye namabali kunemibongo, nangona kunjalo, ndiyamthanda uLorca. Ubuhle, ukomelela, ubungakanani, imvakalelo kunye namandla elizwi lakhe Bafikelela kumanqanaba aphezulu emibongo kulwimi oluhle lwaseSpain. Ke omnye unyaka ndibhiyozela umhla wokuzalwa kwakhe, ngeli xesha kunye 5 iisonethi zakhe.
Yonke into ibhaliwe ngoFederico García Lorca. Ayimfuneko kwaye naliphi na igama okanye isikhumbuzi ngobomi bakhe nomsebenzi Ufundwe ziingcali ezininzi. Ndibhala nje apha amanqaku ezoncwadi apho ndibelana okanye ndonwabela endikufundayo okanye endikwaziyo. Kwaye kukho ababhali abasele bekho ngaphezulu kwalo naluphi na uphononongo kumzobo wakho. ULorca ngomnye wabo, enye yazo ifuna ukuziva kuphela kunokufunda. Ke masingakulibazisi ukonwaba kolo kufunda kwakhona.
1 5 iisonethi
1.1 Isonnet yeGongorine
1.2 Izilonda zothando
1.3 Ubusuku bothando lokulala
1.4 Sonnet yesikhalazo esimnandi
1.5 Ndifuna ukulila ngenxa yentlungu yam kwaye ndikuxelele ...
Aba aba-5 banyulelwe ukukhupha inkumbulo yakhe: Isonnet yeGongorine, Izilonda zothando, Ubusuku bothando lokulala, Sonnet yesikhalazo esimnandi y Ndifuna ukukhala ngentlungu yam kwaye ndiyakuxelela...
Le njiwa ivela eTuria endikuthumela yona,
ngamehlo amnandi kunye neentsiba ezimhlophe,
kwi-laurel yaseGrisi uthele kwaye wongeze
ucotha ilangatye lothando xa ndiyeka.
Isidima sakhe, intamo yakhe ethambileyo,
kwisilayidi esiphindwe kabini sogwebu olushushu,
Ngongcangcazela lweqabaka, iperile kunye nenkungu
ukungabikho komlomo wakho kukumakisha.
Sebenzisa isandla sakho phezu kobumhlophe bayo
Kwaye niya kubona ukuba lunjani uncuthu lwengoma
zisasaze iiflegi kubuhle bakho.
Ke intliziyo yam ubusuku nemini
Ibanjwa kwintolongo yothando olumnyama,
Uyalila engakhange abubone ubunxunguphalo bakhe.
Oku kukhanya, lo mlilo utshisayo.
Le grey imbonakalo indirhangqile.
Le ntlungu ingcinga nje.
Le ntlungu yezulu, umhlaba kunye nexesha.
Esi sililo segazi esihombisa
I-lyre ngaphandle kokubetha ngoku, iti ethambisayo.
Obu bunzima bolwandle obundibethileyo.
Le scorpion ehlala esifubeni sam.
Zizidanga zothando, umandlalo wabalimeleyo,
apho ngaphandle kokulala, ndiphupha ngobukho bakho
phakathi kwamabhodlo esifubeni sam esitshonile.
Kwaye nangona ndifuna ingqungquthela yobulumko
Intliziyo yakho indinika intlambo
ngehemlock kunye nothando lwesayensi ekrakra.
Ubusuku bothando lokulala
Ngobusuku phezulu ezimbini kunye nenyanga epheleleyo,
Ndaqala ndalila wahleka.
Ukucekisa kwakho yayinguthixo, izikhalazo zam
amaxesha kunye namahobe kwikhonkco.
Ebusuku ezantsi kwezi zimbini. I-Crystal yosizi,
walila umgama omde.
Intlungu yam yayiliqela leentlungu
entliziyweni yakho ebuthathaka yesanti.
Ukusa kusidibanise ebhedini,
Imilomo yabo kwijethi enomkhenkce
yegazi elingenasiphelo elichithayo.
Kwaye ilanga lafika ngebhalkhoni evaliweyo
kwaye ikorale yobomi yavula isebe lalo
ngaphaya kwentliziyo yam egutyungelweyo.
Sonnet yesikhalazo esimnandi
Ndiyoyika ukulahlekelwa ngummangaliso
wamehlo akho oqingqiweyo, kunye ne-aksenti
ukuba ebusuku ndibeke esidleleni
uvukile wedwa wokuphefumla kwakho.
Ndiyaxolisa ngokuba kunxweme
umboko ngaphandle kwamasebe; kwaye ndiziva ndinjani
ayinayo intyatyambo, umgubo okanye udongwe,
Umbungu wokubandezeleka kwam.
Ukuba ubutyebi bam obufihliweyo,
ukuba ungumnqamlezo wam kunye nentlungu yam emanzi,
ukuba ndiyinja yobukhosi bakho,
sukundivumela ndiphulukane noko ndikufumene
uhombise amanzi omlambo wakho
kunye namagqabi ekwindla yam eyahlukileyo.
Ndifuna ukulila ngenxa yentlungu yam kwaye ndikuxelele ...
Ndifuna ukukhala ngentlungu yam kwaye ndiyakuxelela
ukuze undithande kwaye ukhalele mna
ngekrele, ngokwanga kunye nawe.
Ndifuna ukubulala ingqina ekuphela kwalo
ngokubulawa kweentyatyambo zam
Ndijike iinyembezi zam nokubila kwam
kwimfumba engapheliyo yengqolowa eqinileyo.
Ngamana i-skein ingaze iphele
Ndiyakuthanda, uyandithanda, uhlala uvutha umlilo
Ilanga elibomvu kunye nenyanga endala.
Into ongandiniki yona kwaye andikubuzi
Iya kuba kukufa, okungashiyiyo
Akukho sithunzi senyama ingcangcazelayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Imibongo » Iisonethi ezi-5 zikaFederico García Lorca ukubhiyozela usuku lokuzalwa kwakhe.
Elona phulo lilungileyo… Kungaluncedo kakhulu ukuba bayayenza nababhali beli xesha.
Khetha imibongo ubabonise, ukuze ubazi kwaye ukuba kufanelekile na ukuthenga iincwadi zabo.
unogada hugo sitsho
Kuyathuthuzela ukupapashwa kwemibongo kule nkulungwane etshabalalisa yonke into, ngakumbi iisonethi, ngokoluvo lwam umbongo ngokugqwesa. Kuhle ukuba eli candelo lehlabathi loncwadi alilahlekanga. Ngamanye amaxesha inkumbulo ayinatyala kwezi mpazamo, kodwa ilahleko ye-exquisite, eyona nto ibuhlungu kakhulu.
Phendula unogada uhugo
Ezona ncwadi zintle nguChimamanda Ngozi Adichie